Accueil > Gazetin'ny nosy > Tontolon’ny asa fanaovan-gazety: Hihanjahanja ho hitan’ny havany irery eo ry Rolly Mercia
Tontolon’ny asa fanaovan-gazety: Hihanjahanja ho hitan’ny havany irery eo ry Rolly Mercia
Iray volana lasa eo izay dia namoaka lahatsoratra izahay teto amin’ny La Gazette de la Grande Ile fa tsy hamaly ny fangatahan’ny ministeran’ny Serasera tarihin’i Rolly Mercia sy ny vaomiera manokana natsangany ho saribakoliny mba hamoaka ny kara-panondroana maha-mpanao gazety matihanina. Nandefa taratasy hofenoin’ny isaka ny toeram-piasana fanaovan-gazety mantsy ry Rolly Mercia sy ny tariny, ka tafiditra oa antin’ilay ambarany hoe « fanadiovana », hono. Ho fanisana ny mpanao gazety matihanina, hono izy io, ary miainga amin’io ny fikirakiran’ilay Vaomiera manokana an’izay mahafeno ny fepetra ka mendrika hahazo an’ilay karatra.
Tamin’izay izahay eto amin’ity gazety ity dia nanambara mivantana hoe « ataovy any ny anareo fa izahay tsy hanao ». Avelao izahay tsy ho isan’ny mahazo karatra any. Tsy mahasakana anay tsy ho afaka manao gazety anefa izany, hoy izahay.
Ho an’ny mpanao gazety maro tokoa aloha dia tetika ny fitondram-panjakana hanilihana ny mpanao gazety hitany fa tsy hanohana ny olona hatolony hitantana ny holafitry ny mpanao gazety io. Ka raha izany, tsy misy olana na tsy mahazo an’ilay karatra aza.
Dia efa mifanatona sy mampitovy fomba fijery ny ankamaroan’ny mpanao gazety avy amin’ny foibe fanaovan-gazety maromaro fa tsy hanaiky hataon-dry Rolly Mercia fitaovana hikatsahany ny tombontsoany manokana amin’io resaka karatra io.
Hampiombom-peo ny fianakaviamben’ny mpanao gazety avy amin’ny sehatra tsy miankina amin’ny fanjakana, amin’ny ankapobeny, fa tsy handefa, tsy hamaly an’io taratasy fangatahan’ny ministeran’i Rolly Mercia io.
Izahay eto amin’ny La Gazette de la Grande Ile dia manamafy fa « tsy misy lanjany aminay io fangatahan-dry Rolly Mercia io ka avelao izy hihanjahanja samirery ho hitan’ny havany eo, miaraka amin’ireo mpikambana nasainy mandrafitra ny vaomiera ho saribakoliny. »
Ny namana mpanao gazety amin’ny haino aman-jerim-panjakana koa dia renay fa maro no miombon-kevitra aminay saingy « tsy ho afa-manoatra satria iankinan’ny sakafo sy ny fahaveloman’ny vady aman-janakay ny asanay ka mba tsy homenareo tsiny izahay raha tsy miseho imasom-bahoaka ho miara-dia aminareo ».
Ny fihetsika amboletra ataon’ny tompon’andraiki-panjakana ambony toa izao afitsoky ry Rolly Mercia izao no manafohy ny fotoana itantanan’ny mpitondra fanjakana ny tany sy ny firenena satria zary manentana tsy fidiny ny vahoaka hijoro ka hanilika izany mpitondra manao zinona ny rariny sy ny hitsiny ary ny lalàna velona izany.